Burma Democratic Concern (BDC) « To Restore Democracy, Human Rights and Rule of Law in Burma « Page 2
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုဝန်းရံ အားပေးခြင်း သည် မြန်မာပြည်အနာဂါတ်ကိုလှပစေခြင်းဖြစ်သည်
12/07/2015 08:50 / Leaveacomment
မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲ အတွက် ကြိုးစားရန် ၃ လ ကျော်သာ လိုတော့သည်မို့
ကျတော်တို့ တစ်တွေ အိုးပြစ်အိမ်ပြစ် သားပြစ် မယားပြစ်
ရှိသမျှငွေ ကြေး ခွန်အား စိုက်ထုတ် ပြီး
တစ်သက်မှာ နောက်တစ်ခါ ပြန်မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးညီညီညာညာ နဲ့
အဖွဲ့ချုပ် ကိုဝန်းရံ အားပေးခြင်း သည် မြန်မာပြည်အနာဂါတ်ကိုလှပစေခြင်းဖြစ်သည်
12/07/2015 08:46 / Leaveacomment
NLD ပါတီ မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ဝဝ နီးပါးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မှာဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောလိုက်ပါတယ်။
12/07/2015 08:39 / Leaveacomment
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေပြည်တော်မှာ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်စဉ်
အမျိုးသားဒ်ီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဟာ လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆန္ဒနယ် တစ်ထောင့်နှစ်ရာ နီးပါးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ နေပြည်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာ NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေး အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်တာပါ။
“ကျမတို့ ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်နေပါတယ်၊ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့အပြီး ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းတွေ တင်ပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ်ဆိုတာကတော့ ကြေညာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချပ်အနေနဲ့ ဒီနေ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးခေါ် ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မဝင်ရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်၊ အဲ့ဒီတော့ တိုတိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ် ဆိုတာကတော့ အဓိကအားဖြင်တော့ မပြီးသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက် ပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပါပဲ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာမှာ ပညာအရည်အချင်းတစ်ခုတည်းကို ကြည့်မှာမဟုတ်ပဲ လူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို RFA သတင်းထောက် မဝေယံမိုးမြင့် ကောက်နှုတ်တင်ပြထား တာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တဆက်တည်း NLD ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းမြင့်ကို RFA အဖွဲ့သား ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
12/07/2015 08:33 / Leaveacomment
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်: လူဦးရေး (၂) သန်းလောက်ရှိတဲ့ မဏိပူပြည်နယ်ဟာ (၁၉) ရာစုအစောပိုင်း ဘကြီးတော်မင်း လက်ထက်မှာ မြန်မာ့လက်အောက်ခံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
12/07/2015 08:21 / Leaveacomment
အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကို သင်းတန်းပေးဖို့ ကူညီပေးတဲ့ ဥိးတေဇ ကို လက်ရှိ အစီုးရ က သတိပေး ——– အဖွဲ့ချုပ်ရွေးချယ်ခံ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ကိုတာဝန်ပေးချက် အရတာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ် လွတ်တော်မတက်မှီ အပြီးစီစဉ် ရမှာမို့လို့…
Aerial Views from Asia to Europe
#Burma အမေစု နဲ့ CBS News Agency အင်တာဗျူး ပါ ။ ဗီဒီယို ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အနောက်တိုင်း မီဒီယာများ က အမေစု အရှိန် ၊ ရွေးကောက်ပွဲအရှိန်ကိုသုံး ပြီး ၊…
ရွှေ ဆိုသည်မှာ… … ရွှေ အခေါ်အဝေါ်နှင့်တွက်ချက်နည်းများ (၁) ရွှေ၏ဂုဏ်သတ္တိများ Symbol of gold = Au (Aurum) (Latin word) (အရုဏ်ဦးအလင်းရောင်) Atomic number of gold = 75 Atomic mass of…
Eleven Media Group 12 September 2013 · နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးသူများ၏ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းများလော၊ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော မြန်မာအကောင့် ငါးခုကို အစိုးရအနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုလာ ‪#‎သတင်းဆောင်းပါး‬ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်း ငါးခုဖွင့်ကာ အပ်နှံထားသည့်…
တပ်မတော်နှင့် DKBA ထိတွေ့ တိုက်ခိုက်မှု ၃၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွား၊ နှစ်ဖက် ကျဆုံးမှုရှိဟု ထုတ်ပြန် XINHUA 12 JULY 2015 HITS: 42 အာရှလမ်းမကြီး (ဓာတ်ပုံ- နိုင်မောင်ဇော်)POLITICS, LAW & MILITARY TOOLS PRINT EMAIL SHARE…
မြန်မာဌာန | သတင်းများ ကရင်ပြည်နယ်မှာ DKBA နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား 2015-07-10 ပုံနှိပ်ပါ ရှယ်ပါ မှတ်ချက်ပေးပါ အီးမေးလ် ဦးနိုင်ဟံသာနဲ့ မေးမြန်းချက် DKBA ကလို့ထူးဘော တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ စစ်ရေးပြနေစဉ် Photo: Kyaw Lwin Oo/RFA DKBA ဒီမိုကရေစီအကျိ်ုးပြု…
မြန်မာဌာန | အပတ်စဉ် ကဏ္ဍများ ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက် ပုံနှိပ်ပါ ရှယ်ပါ မှတ်ချက်ပေးပါ အီးမေးလ် ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၉) NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက် အစီအစဉ် ကို RFA…
Myo Yan Naung Thein6hrs · မင်္ဂလာန့နက်ခင်းပါ မိတ်ဆွေတို့ မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲ အတွက် ကြိုးစားရန် ၃ လ ကျော်သာ လိုတော့သည်မို့ ကျတော်တို့ တစ်တွေ အိုးပြစ်အိမ်ပြစ် သားပြစ် မယားပြစ် ရှိသမျှငွေ ကြေး ခွန်အား…
Myanmartandawsint Newspaper 13 mins · ကြံ့ခိုင်ရေး သမ္မတလောင်းအဖြစ် နာမည်ထွက်နေသူ ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိမ်းနှင့် မိသားစု မဲစာရင်းတွင် မပါဝင် ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၈ လာမည့် အစိုးရသက်တမ်းအတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ သမ္မတလောင်းအဖြစ် တင်သွင်းခံရမည်ဟု တစ်ပေး ခံထားရသော ပါတီအထွေထွေ…
မြန်မာဌာန | သတင်းများ NLD ပါတီ မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ဝဝ နီးပါးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် 2015-07-11 ပုံနှိပ်ပါ ရှယ်ပါ မှတ်ချက်ပေးပါ အီးမေးလ် အသံဖိုင် နားထောင်ရန်နဲ့ ရယူရန် ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ မေးမြန်းချက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေပြည်တော်မှာ ဇူလိုင်လ ၁၁…
သဈတော​ကွိုး​ဝိုငျး​ကို ဖကျြ​ပွီး ကုမ်ပဏီ​လကျ​ထဲ အပျ​နေ လှနျခဲ့သော9နာရီက ဝမြှေပါ ရှာခံ တှေ အစဉျ အဆကျ အသုံးပွု ခဲ့တဲ့ စားကကျြ မွေ တှေ အပါအဝငျ ရှာခံ တှေ မှီခို ရှာဖှေ စားသောကျ နိုငျခဲ့တဲ့ သီဟိုဠျ…
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ပုံနှိပ်ရန် မှတ်ချက် ဖြန့်ဝေရန် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ် မီဒီယာ အသံ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် နားဆင်ရန် Playlist ဦးအောင်ခင်, ကျော်ကျော်သိန်း 09.07.2015 10:15 လွန်ခဲ့တဲ့လက မဏိပူပြည်နယ်ထဲ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ မဏိပူနဲ့ နာဂသူပုန်တို့ကို အိန္ဒိယအစိုးရတပ်က မြန်မာပြည်ထဲအထိ လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…
မျက်မှောက်ရေးရာ / သတင်းသုံးသပ်ချက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြဿနာ ပုံနှိပ်ရန် မှတ်ချက် ဖြန့်ဝေရန် The Naf River, on the border of Bangladesh and Myanmar မီဒီယာ အသံ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြဿနာ နားဆင်ရန် Playlist ဦးအောင်ခင်, ကျော်ကျော်သိန်း…
မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးရေး အထောက်အထားနှင့် Institutional Demand – အောင်ထွန်းလင်း ကော်မရှင်က လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကို ပါတီတွေ၊ နောက်ပြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေက လိုက်လုပ်နေ ကြတော့လည်း … အေးပေါ့လေ သူတို့အတွက် အကျိုးလည်းမရှိ၊ မှားရင်လည်း ၀ိုင်းဆဲခံနေရတာ ဆိုတော့ သတင်းစာထဲမှာ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပါဆိုတဲ့ စာလေးထည့်ပြီး မှိန်းနေကြတာများလားမသိ…
‪#‎Myanmar‬’s 2015 General Elections Special Collections 1. ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်သင့်သလဲ? ဒီတစ်ပတ် အစီအစဉ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်သင့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ရန်ကုန်မြို့က ဗေဒါလူငယ်သင်တန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်း၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်…
#Myanmar: ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှု ဆွေနွေးချက်
ဒီတစ်ပတ် အစီအစဉ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်းတွေမှာ အမှားအယွင်းတွေ အမြောက်အများ ပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီး ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ တင့်ဆွေနဲ့ ဝါရင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံက ဦးညွန့်လှနဲ့ ဦးတင်မောင်ထူးတို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ အသံဖိုင် နားထောင်ရန်နဲ့…
Myanmar: RFA Discussion on 2015 General Election
Myanmar 2015 General Election http://vocaroo.com/i/s1PySw7g7JPv# Burma General Election 2015 Discussion http://vocaroo.com/i/s1PySw7g7JPv# RFA Discussion on Myanmar 2015 Election http://vocaroo.com/i/s1PySw7g7JPv# http://vocaroo.com/i/s1PySw7g7JPv# RFA မြန်မာဌာန | တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း 2015-07-05 ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အာဏာပိုင်တွေ…